IiWebinars, Ngaba ziya kusebenzela iBentley? -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/I-Webinars, iya kwenza uBentley?
I-Webinars, iya kwenza uBentley?
Namhlanje ndaya kwiinkomfa zokuqala ze-intanethi ezazisenziwa yiBentley, njengefomathi entsha kwiintetho zee-year; oko akubiza ngokuthi iBeConnected.
Emva kokuphazamiseka kwam ixesha lokugqibela ndizama Ukubhalisa, uburharha obuhle babuyela kum xa ndabona ukuba ngeMedia Player bayenzile iividiyo okanye iinkomfa eziqhubayo zisebenza kakuhle. Ngeengxaki eziqhelekileyo zokwenza isikrini, kuba akunakwenzeka.
Kananjalo indlela yokunxibelelana nokwazisa imiboniso ihamba kakuhle, ividiyo yentombazana entle yenza utshintsho kwaye andiboni ngxaki. Ke kwiphaneli, iikhredithi ezifunyenwe ngokuya kwezi khosi ziyagcinwa, nangona zibonakala emva kweeyure ezingama-24.
Okona kulungileyo, ukuba uboniso-ntetho kwimfuno, lwakuba lubhalisiwe nasemva komhla wokumiliselwa lunokubonwa amaxesha amaninzi njengoko unqwenela. Isandi sicacile, asiyisebenzisi kakhulu i-bandwidth kwaye kunokwenzeka ukuba ucofe iqhosha lokukhawulezisa ukudlulisa izikrini rhoqo kwimizuzwana engama-20 yezinto ezinokuba bukhoma, oko kuyenzeka ukuba ufuna ukubona iPowerPoint hayi isandi okanye uthathe. amanqaku. Unokukhetha indawo yokuqala kwibar yenkqubela phambili. Ngokubanzi, ukusebenza kulungile kwaye ndicinga ukuba ziya kufumaneka ixesha elide.
Kwimeko yabo bahlala, unokushiya ukudlala isebenze, iya kuqala xa ilungile.
Kule nto bahamba kakuhle, kukho umxholo okwaneleyo weeNdlela, i-geospatial, izakhiwo, izityalo, ukuchithwa kwemigodi, i-hydrosanitary kunye neenethwekhi zeenkonzo.
Ubuncinane umxholo kubonakala ukuba ngokwanelisayo epheleleyo kwiindawo apho Bentley uye okukhethekile, leyo izise abasebenzisi abathembekileyo kakhulu abaqale kunye Microstation kodwa ngoku kakubi izicelo particularized.
Kukho into elahlekileyo endleleni, loo mvakalelo yokuhamba kwikorriyali yesikhungo sendibano, kunye Starbuck sisesandleni kwaye sibone kwigumbi apho inani labaphulaphuli kunye nePowerPoint ngasemva likumema ukuba ukhangele.
Ndiyicinga ukuba ukusuka kolunye uhlangothi kufuneka kuqhutywe ulwazi malunga nokuba bangaphi abaxhunyiwe bebona ukulandela umchachazo, kodwa ngokoluvo lwam, umhlaba awukulungelanga oku, ubuncinci kwiinkomfa eziphilayo. Kwaye ngale nto andifuni ukuphikisana neengcinga zam, ndiyazi ukuba le yindlela umhlaba ohamba ngayo kwindawo yoqeqesho, kodwa ndinamathandabuzo anzulu malunga noko ndikubonile kwinkomfa ephilayo, apho amaxesha amaninzi kunzima ukutsala amaqela anomdla angama-25 ( abananto ingxamisekileyo ukuba bayenze), bagcine umdla wabo (ekufuneka ubekhona ukusukela oko belapho) kwaye ubanyanzele ukuba banike izimvo (xa bengxamile ukuphuma apho kwaye beze nje bacele ikhadi lebhizinisi). Ngoku masiguqule oku kube yifomathi entsha, apho abanomdla abangama-25 baninzi kuba akusafuneki babekho eUnited States, kodwa baneshedyuli exakekileyo, uninzi lwazo alunakunxibelelana okuhle kwaye xa umboniso uqalile banokucofa ngokulula Kwelinye icala.
Abaphulaphuli bakaBentley ayisiyo i-ESRI okanye i-AutoDesk, apho kuye kwafuneka ndilwe ndaza ndacela indawo kwinkomfa apho kukho abantu abangama-200. Kwaye uBentley kufuneka acinge ngale nto, kuba uqeqesho kwi-Intanethi sisisombululo esihle kodwa amava athi ukuze isebenze kufuneka kubekho ukuzibophelela okunamandla kakhulu.
Kwiminyaka emibini edlulileyo, uBentley wenza uphando phakathi kwabo bahamba kwiinkomfa zonyaka kwaye i-95% yathi wayenelisekile; Ndicinga ukuba ekugqibeleni lo msebenzi baya kuyenza kwakhona kwaye ndiqinisekile ukuba abaninzi baya kuphinda balahleke Starbuck.
Umxholo: kufuneka ubonwe
Ndithathe inxaxheba kwinkomfa eboniswe nguPat Filoteo, ovela kuMicrosoft. Ngokwam, ndiphoxekile bubuhlwempu bokubonisa, lo mfo ngesele eshiyekile okokugqibela hayi ekuvuleni komgca we-geospatial apho athe wathi amanzi afudumeleyo ... afudumele.
Umxholo wawunomdla ukususela ekuqaleni (Isikhundla asikodwa) okanye ukuba kwakunjani ngesiNgesi "Isikhundla asikhethi", Lo mhlobo angasebenzisa ikhosi yePowerPoint ngenxa yokuba ingxaki yakhe ifom, kungekho kwimvelaphi.
Ukuxhatshazwa, ubuncoko bomxholo, ukuba isikhala sisona sinye nje, ngokukodwa kwi-intanethi yewebhu apho umgangatho oye waba ngumsebenzi oye wathunyelwa izicelo ezincinci ze-hybrid ezibizwa ngokuba mashups. Kodwa ngalo mbandela, ube lihlwempu, emva koko bendilinde ukubona ukuba ngubani obuzileyo okanye othethwano; Nokuba andiqondi kakuhle, ukuba izimvo eziphilayo ziya kuviwa ngabo bonke, okanye ukuthula kukude kakhulu.
Unomdla wokuthelekisa phakathi kweendlela eziqhelekileyo zokubona indawo yendawo, apho kwakukhona khona:
Ukuthathwa kunye nokuqhelaniswa kwezilungelelaniso
Yakha izithako kwimephu
Yakha izalathisi ezibekwe
Ngoxa ixa elizayo lenziwe lula kwiinkcukacha zedatha, kuba uhlangothi lwendawo luyimpawu nje ... ukuthunyelwa ngumcimbi wewebhu eqhelekileyo.
Bekungayi kuba mbi, ukubonisa into engaphezulu iprintscreens Ezinye iiwebhusayithi ezidibanise uMhlaba oSebenzayo. Igrafu, nokuba ineemilo ezizenzekelayo (endaweni yeebhulethi ezilula), apho kuboniswa ukuba idatha ibifana, ukuba sinazo ezinye iitafile ezibhekisa kwimeko yendawo, ziguqulwe zaba ngumboniso, into entsha kwaye oko kusenza sibone indawo nangona sihlala sicinga ngayo. Kodwa ekugqibeleni, ndiyakuqonda ukuba kwiMicrosoft, akukho nto ikhethekileyo ukuba ubonise ntoni kwindawo yendawo ... iGoogle sele ibadlile bephila.
Umcimbi omkhulu otshatyalaliswayo ... kulula ukusitsho kuthi, ukuba besibukeli 😀
Ngoku ndimele ndilindele umxholo wegosospatial kunye nophuhliso lomhlaba oluqala kwi-1 kaJulayi.
Nxibelelana, iisemina ezili-151 ezikwi-intanethi
I-Geofumadas: iminyaka eyi-30 ye-AutoCAD kunye ne-Microstation